Satatee: Kitaaba Ministira Muummee Doktar Abiyyi
Satatee: Kitaaba Ministira Muummee Doktar Abiyyi Featured
Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad ga’umsa gama siyaasaan yeroo dhiyoo keessatti agarsiisaa jiraniin adda duree ta’uurra darbanii gurraafi ija ummata Itoophiyaa keessa seenuu danda'aniiru.
Doktar Abiyyi ciminaafi bilchina siyaasaa akkasumas ga’umsa barnootaa qabaniin alatti barreessaa kitaabilee seenaafi siyaasaa ta’uun isaanii ammoo daran kan nama ajaa’ibudha.
Tibbuma kana odeeffannoo Doktar Abiyyi barreessaa kitaabaati jedhu argadheen sakatta’insan taasiseen kitaaboota lama qabatamaan gabaarra oolchuusaanii hubadheetan jira. Kitaaboti kunneen seena qabeessafi qabiyyee isaaniin bilchaataa ta’uurraa kan ka’e beekamatiin karaa barreessitootaafi qopheessitootaan dhugaa bahameefii jiru ibsituudha.
Kitaaboota kanneen keessaa kanan yeroof argadheen dubbise kitaaba Afaan Amaaraan barraa'e, maqaa 'Satatee' jedhuun beekamu isa tokkodha. Kitaabni kun maqaa masoo 'Kadar Satatee' jedhuun kan beekamu yoo ta’u, qabiyyeen isaa seenaa, dhugaa dhokate, siyaasaafi eenyummaa Oromootaa kan ibsudha.
Dhimmoota achi keessatti ka’aniin sirnoonni darban hedduun isaanii injifannoo gootota muraasaan galmaa'an qofa rarraafatanii deemuun alatti Oromoota qabsoo hadhaa'aafi wareegama qaalii kaffalan kan leellisan hinturre.
Kanarraa kan ka’e qabsaa’onni Oromoo Itoophiyaa har’aaf bu’uura buusan hedduun isaanii kitaaboota seenaarratti osoo hinqubatiin hafuun isaanii dhiibbaafi jibba sirnoonni darban sabichaaf qaban kan calaqqisudha.
Seenaa injifannoo Adwaa faashistoota Xaaliyaaniirratti galmaa'e keessatti qooda Oromootni golee afraniin bahaa turan adda duree ta’us dhiibbaa sirnichi Oromootarratti geessisurraan kan ka’e hagas mara hinseeneffamiin hafeera.
Dhugaan dhokate bulee ka’uun hinooluu, kan muraasotaa fardaaf lafoon lolanii Itoophiyaa bilisa baasan keessatti Oromoonni olaantummaan hogganaa turuufi injifannoo cululuqaa galmeessisan keessatti sirna bittaa Xaaliyaanii dhabamsiisuu danda'aniiru.
Kun ta’us sirnoonni Atsees ta’e sirni nama nyaataa eenyummaa injifannoo Oromootaan galmaa'e kana barreeffamaan dhalootaaf dabarsuurraa of qusachuun isaanii maaliif kan nama jechisiisuudha.
Kitaabni 'Satatee' jedhu kun bara 2016 kan qophaa'e yoo ta’u, haqa kaleessa dhokate har’a ifa baasuun bakkeetti mul’isaa jira.
Qabsaa’ota sirna faashistii Xaaliyaniirratti aarsaa ta’anii kan akka Baalchaa Saafoo Ykn Baalchaa Abbaa Nabsoo, Abbaa Goree, Abune Pheexiroos kan Finfinne keessatti Xaaliyaaniin ajjeefamaniifi Abune Maarqoos Goree keessatti ummatni Xaaliyaniirratti akka hinkaaneef abaaraa jedhamanii wayita gaafataman diduusaaniin kanneen aarsaa ta’an keessaa muraasotadha.
Kun ta’us qabsaa’ota aarsaa ta’an kana seenaan nu yaadachiisu jira jechuun hindanda’amu. Seenaan Baalchaa Saafoofi Abuna Pheexiroos muraasa katabamus qabsaa’onni hedduu osoo isaaniif hinseeneffamiin hafuunsaa dhiibbaa sirni moototaafi sirni nama nyaataa Dargii geessisaa ture sababa.
Seenaawwan hedduu afaaniffaan darbaa as gahanis heddun isaanii Awurooppaanota dur biyya keessa turaniin barraa'anii kan argamanis tokko lama miti.
Doktar Abiyyi Ahmad kitaabasaanii 'Satatee' jedhu kana keessatti kan seenaan dagate maddoota garagaraa waabeeffachuun dubbisaaf kan dhiyeessan yoo ta’u, qabsoo Kadir Mahaammad, Hasna, Bilaal ykn Maqaa 'Kadir Satatee' jedhuun beekamu bifa seenessaaf gurratti mi’aahuun nuuf arjoomaniiru.
'Kadir Satatee' akkuma qabsaa’ota dagatamanii sirna bittaa moototaafi abbaa irree irratti qabsoo taasisaa turus kitaaba seenaarratti hinseeneffamiin tureera.
Kitaabni isaaf qophoofte kun ammoo qabsaa’ota dagatamaniifi akkaataa qabsoon isaanii itti milkaa'aa ture kan agarsiistudha. Dubbistootaa seenaan babbareedaa Oromootaan dalagamaa ture osoo hinseeneffamiin hafuusaaf barreesitoota kan komachiisudha.
Dhugaa jiru osoo beekanii kanneen dhugaa awwaalan akkuma jiran dhugaa jiru haqaaqanii kan barreessanis hindhiban. Ta’us kan haqaaf dhaabates sirna hamaa darbe sana safeeffachaa bu’uura xiqqoo buusuu kan danda'anis tokko lama miti.
Moototni darbanis ta’e sirni abbaa irree aangoo ofittummaan dhuunfachuun kan namarratti of muudaa of ijaaraa isa kana ammoo jiraatti awwaalaa kan turan yoo ta’u, kitaabni seenaa 'Satatee' kun 'satat gootee' haqa jiru kan mul’iste fakkaatti.
Kitaabni kun keessumattuu weelluudhaan, walaloodhaan, jechamaan dabaltee seenaa darbeefi ukkaamamee dukkana keessa ture ifatti baasuun dhaloota haaraa dadammaksuu keessatti bakka guddaa qabdi.
Kanamalees, afaan Amaariffaan barraa'uun ishii sabaaf sablammiileen martinuu haqa jiruufi ukkamamee ture akka beekaniif akkasumas rakkoo ilaalchaa ture akka fooyyeffataniif bu’uura kan buustu yoo taatu haqa dhokate barreessuuf kobbeen keenya mirgisuu qaba.
Egaa Ministirri Muumme Itoophiyaa yeroo ammaa ijaaf gurra ummata bal’aa ta’an kun gahumsa barruu gara garaa kan qaban yoo ta’u kitaaba 'Satateen' alatti kitaaba gara biraa “Irkaabinnaa Manbar” jedhus barreessanii gabaarra oolchaniiru.
Walumaagalatti seenaa dhugaa barri dhokse qabsaa’aafi quuqamatu baasa. Qabsaa’aan dhugaa bilchina siyaasaan, barnootaan, gahumsaan of ijaare haqa dhokate ifatti baasee wayita katabu ijaaf gurra ummataa ta’eera jechuun ni danda'ama.
Yeroo ammaattis Ministirri Muummee Itoophiyaa abbaa Kitaaba 'Satatee' ta’an kun kutannoo siyaasaafi jechoota warqee ta’an fayyadamuusaaniin hogganaa yeroon barbaadu ta’uusaaniin golee afraniin deeggaramaa jiru.
Torban kana/This_Week 12463
Guyyaa mara/All_Days 1296974